Matte Nhema 4 padiki Bathroom Faucet Centerset
Bhawa Sink Faucets
Pot Yekuzadza Faucets
musha / Mabheji ekugezera / Kaviri Habata Bathroom Faucets / WOWOW Centerset Yekugezera Faucet Ine Drain Assembly Matte Nhema
WOWOW Centerset Bathroom faucet Ine Drain Assembly Matte Nhema
Rated 4.85 Kunze kwe5 yakavakirwa 20 kasitoma ratings
(20 kasitoma wongororo)
Bathroom faucet matte dema 2 inobata inopa kushanda uye dhizaini yazvino mu 1. Ine 3-gore waranti. Tenga yedu Bathroom faucet matte dema 2 inobata izvozvi!
2321400B mirairo yekuisa
shure mungoro yekutengera
Matte Nhema Imwe Towel Hooks Bathroom
WOWOW Kutenderera Towel Mhete Matte Nhema
Chimbuzi Pepa Mubati Wadziro Yakakwira Nhema
Bathroom faucet matte dema 2 mubatos 2321400B
Sezvo vanhu vazhinji vachisarudzira sirivheri kana chrome yekugezera pombi, unogona kuita chirevo chakakura chefashoni pamwe nematte matema efa yekugezera. Haisi chete iyo iyi vara inopa yako yekugezera kutaridzika uye kwakasarudzika kutaridzika, iyo matte nhema diki ichiri yakavanzika uye yakasarudzika zvakare. Kwete zvakangoerekana zvaitika matte dema rave yazvino dzekare kara kana zvasvika kune yekugezera dhizaini. Matte nhema tsika isingazoputi nekukurumidza zvachose. Iyo matte nhema kupedzisa kwepombi yekugezera inogona kupa yazvino kubata kune chero yekugezera.
Mumwe anogona kurerutsa chokwadi chekuti mapombi ekugezera ndechimwe chezvinhu zvakakosha mune chero yekugezera zvine chekuita nemhando. Kunyangwe fauceti yekugezera iri madiki, vanhu vanowanzo tarisa pamapombi ekugezera sezvo maziso avo anokwezva otomatiki kune aya akakosha mapoinzi. Naizvozvo mapombi ekugezera anogona kugadzira kana kupaza chero yekugezera. Mapombi ekugezera ane mukana wekusimudzira imba yekugezera. Imba yekugezera yakapusa kana shoma inogona kukwidziridzwa nehombodo dzemhando yepamusoro. Iyo yakashongedzwa yakasarudzika retro dhizaini yeiyi yekugezesa pombi WOWOW inoita kuti imba yako yekugezera ive yemafashoni kamwechete. Iyo yekugezera pombi matte nhema 2 inobata yeWOWOW ndeimwe yemapombi ekugezera ayo anogona kunyatso shandura yako yekushongedza yekushongedza.
Matte nhema yekugezera faucet iine ma 2 inobata
Chimiro chinhu chimwe chete, asi mashandiro anogona kutonyanya kukosha. Pane hwaro hwezuva nezuva iwe unoshandisa yako yekugezera kakati wandei uye iwe unoda yako yekugezera kuti ikushandire iwe nenzira inotsigira yako yezuva nezuva maitiro. Izvo zvinoverengera pasina kupokana nezvemabasa seshawa uye bhati rekugezera. Asi iwe pamwe unoshandisa yako yekugezera singi kunyangwe kupfuura zvimwe zvinhu zvekugezera kwako. Ndokusaka iwe uchifanira kushandisa zvakanyanya kutarisisa kune ichi chikamu chemba yako yekugezera. Kunze kwekugezera kuri nyore, pombi yekugezera inoisa mashandiro ese aunoda.
Iyo yekugezera pombi matte nhema 2 inobata yeWOWOW inovimbisa yakanaka mvura ruzivo. Iyi matte nhema 4 inch yekugezera pombi ine maviri anobata. Nemabatiro aya unogona kugadzirisa tembiricha yemvura uye nekumhanya zvisina tsarukano kune zvaunoda. Iyo yakakwira arc spout inokupa iwe nzvimbo yakaringana pakati peye spout uye yako yekugezera singi kuitira kuti ushambidze maoko ako kana kushambidza kumeso kwako. Iyo nzvimbo iri 2 inches uye inopa yakakwana nzvimbo. Nekudaro, haufanire kunetsekana nenzvimbo shoma senge ine yakadzika arc yekugezera pombi.
Pamusoro pezvese, iyo inotenderera inoyerera yeiyo yekugezesa pombi matte nhema 2 inobata yeWOWOW inopa 360-degree kutenderera kuti zvive nyore kushandisa. Iyo yekugezera pombi matte nhema 2 inobata inouya neinosimudza tsvimbo drain mune imwechete matte nhema ruvara kuti ugadzire humwe kubatana neyako yekugezera sink. Zvinonyatso nyore kuvhura uye kuvhara ino gungano rekudonha neyakaganhurirwa mubato kuseri kweiyi tepi yekugezera.
Chekutanga-kirasi yekugezera faucet matte dema 2 inobata
Kunze kwemagadzirirwo azvino uye akashinga dhizaini, WOWOW inonyanya kuzivikanwa neyakareba mhando. Sezvo ichisundira aya emhando yepamusoro kubva kubhodhi rekudhirowa kusvika kufekitori yavo yemazuva ano, zvese zvidiki diki zveiyi pombi yekugezera yakagadziridzwa kusvika pakakwirira. Izvo zvinokupa iwe yemhando yepamusoro yekugezera pombi iyo inozoshanda basa rayo nemazvo uye inovimbisa hupenyu hwakareba kutsungirira.
Gumbo rakasimba reWOWOW yekugezera pombi matte nhema 2 inobata inogadzirwa nesimbi yakasimba zvinhu sezvo izvi zvichisimbisa kuita kwakanaka uye kutsungirira kwakanyanya. Zvakare kuvakwa kwacho kwakagadzirwa nemhangura yakasimba uye kwakapedzwa ne zinc alloy. Haufanire kunetseka nenyaya dzekora nekuda kwezvinhu izvi. Kunze kwezvo, pombi iyi yekugezera haina lead-isina kuchengetedza mhuri yako kusvika pakakwirira. Iwe unonzwa mutsauko wehunhu uhwu ipapo paunenge uchiubata. Iyi nhema nhema yekugezesa tepi matte nhema 2 inobata haina kusvibiswa zvakare. Naizvozvo zviri nyore kuchengetedza. Ndozvamunowana kana iwe ukatenga yepamusoro mhando yekugezera pombi.
Yehupfumi yekugezera faucet matte dema 2 inobata
Iyo yekutanga ceramic disc mukati meiyi dhizaini yekugezera pombi mune matte nhema inoita kuti mvura iyerere zvakanaka uye isingadonhe-isina. Iyo spout yeiyi yekugezera pombi ine ABS aerator. Neichi chinhu chinogadziridza iwe unozogona kuchengetedza pane yako yekushandisa mvura uye kubatsira kuchengetedza iyo mvura zvakare. Iyo NSF-yakasimbiswa vharuvhu inoshanduka mushe kukupa iwe yakawanda nyaradzo. Iyo yemhando yepamusoro katuriji yakaedzwa pamazana mazana mashanu emvura macircuit, uye ichiri kuita nemazvo. Uye izvi pamutengo wepfuma!
Sezvo kugadzirwa kweWOWOW kuchinyanya kuenzaniswa uye kuchinjika, WOWOW inogona kupa ino yepamusoro-soro yekugezera faucet matte nhema 2 inobata pamutengo wakakwira kwazvo. Pamwe pamwe neinobudirira uye isingadhuri kutenga uye kushandiswa kwezvinhu, WOWOW inochengetedza zvakanyanya pamitengo yekugadzira. Uye zvakadaro pasina kurasikirwa nechinangwa chekutanga chekugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvisingaonekwe. WOWOW inovimbisa kuti hauzowani pombi yekugezera yemhando imwechete pamutengo wakaderera pane watinopa.
Zviri nyore kuisa uye zviri nyore kuchengetedza
Iyi matte nhema Centeret yekugezera pombi ine maviri anobata zviri nyore kuzviisa wega pasina nyanzvi. Nenzira iyi iwe unogona kutoponesa zvimwe nekuisa iyi yekugezera pombi matte nhema 2 inobata pachako. Iyo 2 inch yekugezera faucet inoenderana chero matatu-gomo gomo. Iyo yekugezera pombi matte nhema 4 inobata inouya necheti yezvishongedzo kugadzira kuisa chidimbu chekeke, kusanganisira pombi yemvura, yekusimudza tsvimbo drain uye dhiketi ndiro yekuisa-nyore kuisa.
Nepombi yekugezera matte nhema 2 inobata yeWOWOW iwe uchave unochengetedzwa pombi yekugezera inodarika ese maindasitiri zviyero. Iwe unozogona kuchengetedza iyi yekugezera pombi nyore, nepo iwe uchigona kubvisa yakaoma mvura masara nekubata zvinyoro zveminwe yako. Sezvo pombi iyi yekugezesa iri nyore kuchenesa, unogona kuramba uchishandisa pombi iyi kwenguva yakareba, ichivimbisa mhando dzemhando yepamusoro dzemvura. WOW kwete pasina chinhu chinopa 3-gore garandi nguva yekuvimbisa mashandiro eiyo yekugezera pombi matte nhema 2 inobata.
Zvakanakira imba yekugezera faucet matte dema 2 inobata muchidimbu:
 Inopa wow-chinhu kune chero yekugezera
 Yakasarudzika matte dema dhizaini
 Yakakwira arc faucet yekupa yakakwana nzvimbo
 Smooth uye inodonha-isina kubuda
 Kuita kwepamusoro
 Yakagadzirwa neyemhando yepamusoro emidziyo
 Chiri nyore kuchenesa uye chiri nyore kuchengetedza
 makore mashanu-waranti
SKU: 2321400B Categories: Mabheji ekugezera, Kaviri Habata Bathroom Faucets Tags: drain musangano, kubata maviri, mudziyo unonyura faucet
6 x 2.2 x 7.5 inches
Nhamba Yema Holes
Kubata / Lever Kuiswa
Simudza Rod Drain
20 anodzokorora nokuti WOWOW Centerset Bathroom faucet Ine Drain Assembly Matte Nhema
B *** m March 26, 2019
Rated 5 kubva 5
Chaizvoizvo RUDA uyu pombi. Iwe haugone kurova uyu mutengo uye hunhu hwakanakisa.
M *** t2020-03-20
Ndinoda kutaridzika kwepombi iyi. Akaita musiyano mukuru mukutaridzika kwekugezera. Mutengo unonzwisisika.
*** s2020-03-22 US
Akanaka matepi. Nyatso kuvakurudzira. Kukosha kukuru
G *** a2020-03-25
Anonyatsofara neichi chigadzirwa- yakanyatsogadzirwa zvakanaka uye nyore kuisa. Iwo iwo mirairo ndeye nyeredzi-kumberi, zvese zvaunoda (kubvisa minwe) zvinouya mupakeji, uye chigadzirwa chekupedzisira chinotaridzika chaizvo! Ini ndinoda mashandisiro anoita spout!
E *** d2020-03-26
Rated 4 kubva 5
Inotaridzika yakakura, inoshanda kwazvo. Unogona kuwana zvakare.
L *** e2020-03-28
Yakapusa kwazvo kuisa. Ida iyo iyo faucent swivels
F *** i2020-03-28
Ndakairaira izvi ndikatambira iyi faucet yekugezesa nhema manheru iwayo yakaiswa mukati mehafu yeawa kusimudzira kwakanaka kwazvo. Ndatenda.
B *** y2020-03-29
akanaka anotaridzika uye akanaka mutengo pombi akati yaive yakanaka pombi uye yakanaka mhando yemutengo
J *** e2020-04-01
Pombi yangu yakati iyi pombi mbiri yekubata yaive nyore kuisa. Kumanikidza kwemvura kwakanaka kwazvo, kunyanya mvura inopisa. Ini ndinofarira iyo spout swivels uye ini ndinogona ikozvino kuzadza zvinhu mubathroom uye handifanirwe kuenda kune yangu yakakwira arc kicheni pombi.
J *** n2020-04-02
Zviri nyore kuisa, zvinoita kunge mhando yakanaka uye yakanaka kwazvo! Inotaridzika kunge yakapfuma uye yakafanana.
E *** x2020-04-04
Ndinoda pombi iyi yekugezera mabhureki maviri anotaridzika anotaridzika kunge echinyakare anotaridzika uye zvaive nyore kuisa
Yakavimbika huwandu uye yemazuva ano dhizaini yeiyi pombi. Yakakwana kukwana mumba yekugezera
E *** n2020-04-10
Huru kuvandudza kune yekugezera. Sleek dhizaini, yakaiswa nekukurumidza uye nyore.
Pakutanga ini ndaive ndakaomarara (nekuda kwekushaya ruzivo). Pombi yangu akandibatsira. Ini ndinobvuma kuti mutengo wayo unoshamisa, inoratidzika kunge inodhura uye mhando yacho yakanaka. Inokurudzirwa kwazvo kutenga! !
G *** k2020-04-15
Ini ndaive nemunhu anobatsira kuisa yangu, asi akati ivo vaive nyore kuisa. Iyo pakarepo yakashandura imba yangu yekugezera kutarisiko chazvino chandanga ndichienda.
N *** e2020-04-18
Prefect - iyi Faucet yekugezera yakarongedzwa zvakanaka uye iri mhando yepamusoro
J *** m2020-04-20
Inoshanda chaizvo, Faucet rinotaridzika kwazvo
S *** l2020-04-25
Ida kutaridzika nekuita kwepombi iyi. Rukova rwemvura rwakakura! Ndinofarira kuti pombi inogona kufambiswa padivi. Unogona kutenga zvakare!
w *** o2020-04-26
Kugadziridza kutaridzika kwekunyura kwekare uye kureba kureba kunopa imwe nzvimbo yekuyerera kwemvura. Kukosha kukuru kwemari!
w *** o2020-04-28
Pombi iyi iri nyore kuisa. Chitarisiko zvakare chakanakisa. Kutengeka.
WOWOW 3 Hole 4 Inch Centerset Bomba
WOWOW Chrome Bathroom faucet neyeDrain Assembly
WOWOW Imwechete Yakabata Bathroom Faucet Matte Nhema
Matt Black Tall Basin Musanganiswa Tap
TAURA NESU TEL: 3476134901 E-mail: sale@wowowfaucet.com